We She Me: အာရှကပဲ သာသလား
ရုံးသွားတဲ့ လမ်းမှာ ကြော်ငြာတစ်ခု တွေ့တွေ့နေတယ်။ Aberdeen European Opportunities Fund ကပါ။ European Fund တွေမှာ Invest လုပ်ဖို့ ကြော်ငြာထားတာပါ။ သူက ဆိုတာက "With all this talk about Asia, do you think Europe is shrinking? Think Again." လို့ပါ (တိတိကျကျ ကြီးတော့ ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်၊ မှတ်မိသလောက်ပဲ)။ သိတော့ သိပါတယ် Europe ကို Asia က မယှဉ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာ။ Singapore မှာကလည်း ၀ါဒ သိပ်ဖြန့်တာဆိုတော့ Singapore ကများ ဘယ်နိုင်ငံတွေထက် သာသလဲ။ တွေ့သမျှ ပစ္စည်းတွေကလည်း China က လုပ်တာဆိုတော့ Europe မှာ ဘာတွေများလုပ်နေသလဲ။ Samsung (Mobile) ဖုန်းတွေက တဖြည်းဖြည်း Nokia ဖုန်းတွေနဲ့ နင်လား ငါလား ဖြစ်လာတော့ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ ဖင်လန် ဘယ်ကသာသလဲ။ Shanghai မြို့ကြီးကပဲ Manhattan ထက် မိုးမျှော်တိုက်တွေ ပိုများသလား ။ အဲဒါနဲ့ ရုံးရောက်တော့ Google မှာ "Japan GDP" ၊ "Germany GDP" စသည် စသည်နဲ့ ရှာကြည့်ပါတယ်။ ကိုယ်ကလည်း Economist လည်းမဟုတ်၊ အီကိုဆိုတာလည်း သင်ဖူးတာမဟုတ်၊ Financial ဘက်မှာလည်း ဘာမှ သိတာမဟုတ်တော့ ဒီဟာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ တိုင်းပြည် တစ်ပြည်နဲ့ တစ်ပြည် စီးပွားရေး ကောင်းမကောင်း ယှဉ်ချင်ရင် GDP လောက်ပဲ ယှဉ်တတ်တော့ GDP ပဲယှဉ်ကြည့်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်း ရှာကြည့်ရုံနဲ့ Europe နိုင်ငံတွေက ပိုသာတယ် ဆိုတာ သိသာပေမယ့် သေချာအောင် Spreadsheet တစ်ခုထဲ ထည့်ကြည့်ပါတယ်။ တစ်ခါ ကိုယ်ရှာထားတာလေး ဒီအတိုင်းထားမယ့် အတူတူ blog လိုက်မယ်ဆိုပြီး blog လိုက်တယ်။
* In Billion USD
စကားမစပ် US ရဲ့ GDP က 13 Trillion ရှိပါတယ်။
စိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့ နိုင်ငံတွေပဲ ကြည့်ထားပါတယ်။ ရေနံသူဌေး အရှေ့အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံတွေ မပါပါဘူး။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်စာပဲ ကြည့်ထားတော့ Shrink ဖြစ်သွားလား မဖြစ်သွားလား မသိပါဘူး။ Asia နဲ့ Europe ဘယ်လောက် ကွာလဲဆိုတာလောက်ပဲ သိရပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ထဲမှာ ပေါ်လာတာလေး သိချင်တာလေးကို (Internet မှာ) ရှာကြည့်လို့ ရတာကိုက ကျေဇူးတင်လှပါပြီ။
ဒီဟာက အပျော်သဘော တင်တဲ့ Post ဆိုတော့ အမှားအတွက် တာဝန်မယူပါဘူး။ ပြင်ပေးရင်တော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မောင်စူးစမ်း (ကျွန်တော့် အဘိုးလောက်ရှိတယ်) တို့လိုက ရေးမယ်၊ ရေးထားတယ် ဆိုရင်တော့ အားရင် ဖတ်ချင်ပါတယ်။
imaginary clouds no2 - 5/29/07, 10:46 PM
Dong - 5/30/07, 1:29 PM
Good article.. carry on Cheers
▼ May ( 13)